Orinasa mpanamboatra | Mpanamboatra mpanamboatra Sina, mpamatsy
Vokatra mahazatra P&Q
Fahazavana manaporofo ny toetr'andro / hazavana manimba-porofo
Fahazavana manaporofo ny toetrandro / fanimbana-hazavàna manify
Mpanatitra ahy sy hazavana amin'ny lampihazo
Jiro lehibe amin'ny indostrialy
Maty hazavana amin'ny valindrihana alimo
Jiro an-dalambe LED
Maty fanalana amin'ny ankapobeny
jiro mpampita ahy
Jiro porofo manimba
Die casting dia dingana famokarana mahomby sy ara-toekarena. Izy io dia ampiasaina hamokarana ampahany vy be pitsiny geometrika izay noforonin'ny bobongolo azo ampiasaina, antsoina hoe dies. Ireo maty ireo amin'ny ankapobeny dia manolotra androm-piainana lava, ary afaka mamokatra singa manintona amin'ny fahitana izy ireo.
Ny fizotran'ny fanariana maty dia ny fampiasana lafaoro, vy metaly, milina famonoana maty ary die izay namboarina ho fanamboarana ilay ampahany. Atsonika ao anaty lafaoro ilay vy ary avy eo ny masinina manary maty dia mampiditra an'io vy io amin'ny maty.
Ny P&Q dia tsy manana orinasa fanaovana tsindrona plastika, fa afaka manome ny faritra metaly ihany koa arakaraka ny takian'ny mpanjifa. P&Q tsindrona plastika, kely ka hatramin'ny lehibe, indrindra amin'ny fampiharana jiro sy fanaka eny an-dalambe.
Ny P&Q dia tsy manana orinasa vita amin'ny metaly, fa afaka manome ireo faritra metaly arakaraka ny zavatra takian'ny mpanjifa ihany koa. Kely ka hatramin'ny lehibe, indrindra amin'ny fampiharana jiro sy fanaka amin'ny arabe.
Fivoriamben'ny vokatra vita sy vokatra semi-vita
Orinasa fivorian'ny P&Q any Haining, Zhejiang, Sina. Tsy latsaky ny 6000 m2.
Ny famokarana dia niasa tamina fitantanana kalitao ISO9001. Ary ny birao sy ny orinasa dia nitantana ny rafitra ERP hatramin'ny taona 2019.
adiresy:Trano No. 11, No. 8 Haining Avenue, HAINING, JIAXING, 314400 Sina